Tsoratadidy tany am-boalohany: hevitra hampiavaka ny tetikasanao | Famoronana an-tserasera
Raha tena tia mamaky ianao dia azo inoana fa hanana maripejy be dia be ao anaty vatasarihana; na dia ny rakitra satria tsara tarehy toa anao, satria tany am-boalohany maripejy ... Na mety mpanenona mahay ianao, ary amin'ny fotoana iray no tonga manerana ny vaomiera hanao ny mari "eto aho, nijanona" ny mpitory, na ho an'ny tenantsika navoaka.
Na izany aza, dia hanome anao izahay tsoratadidy tany am-boalohany hevitra ka izay mahita azy dia ho gaga amin'ny fomba hamoahan'ny famoronana famoronana endrika famoronana toy izany. Moa ve ianao te-hahita ny zavatra efa nieritreritra momba?
1 Inona avy ireo tsoratadidy
2 Hevitra momba ny tsoratadidy tany am-boalohany izay azonao atao ny manao azy
2.1 Teboka famakiana 3D
2.2 Tsoratadidy voalohany: saribakoly vita amin'ny taratasy
2.3 Tsoratadidy zoro
2.5 Tsoratadidy tany am-boalohany
2.6 Tsoratadidy peta-kofehy
2.7 Tsoratadidy tapaka
2.8 Hevitra famakiana voalohany: sehatra amin'ny literatiora
Inona avy ireo tsoratadidy
Tsoratadidy, 'eto no nitoerako', tsoratadidy, tsoratadidy, tsoratadidy, tsoratadidy ... misy anarana maro ho an'ny zavatra iray izay fantatry ny olona tia boky tsara. Izy io dia fanaka, matetika fisaka, izay ampiasaina mba hametraka eo amin'ny pejy ny boky, matetika noho ny iray izay no mamaky.
Raha ny mahazatra, rehefa mividy boky, ianao foana manana tsoratadidy mba hahafahanao mametraka azy io ary hahafantatra ny alehanao hamaky raha toa ka mila ajanona amin'ny fotoana iray ianao. Ary saika efa-joro elongated foana izy io, fa amin'ny fotoana hafa dia misy endrika hafa ampiasaina. Ary rehefa tsy manana na inona na inona eo am-pelatananao ianao dia mifidy sombin-taratasy, napkin na izay alainao tanana.
Mpamaky tsirairay dia manana sasany tiany. Misy ireo izay te-hanana tsoratadidy isaky ny boky; ireo izay ampiasaina azy, na manangona na dia ireo maripejy. Ary avy eo dia misy ireo, sasatry ny tsoratadidy mahazatra, misafidy ny hamorona azy manokana, na mpamaky na mpanoratra.
Hevitra momba ny tsoratadidy tany am-boalohany izay azonao atao ny manao azy
Raha mpanoratra mitady ianao hevitra momba ny tsoratadidy tany am-boalohany; na raha mpamorona endrika ianao ary te hifantoka amin'ny tontolon'ny literatiora mba hampisehoana ny sanganasao, ny teboka mamaky dia mety ho tsara tokoa hampahafantarana ny zavakantonao sy ny olon-kendrinao.
Ankehitriny, tsy maintsy mamorona zavatra tena izy ianao ary, noho izany, ireto misy hevitra vitsivitsy.
Teboka famakiana 3D
Na dia fisaka matetika aza ireo mpampisaraka, dia efa elaela ihany izy ireo no niloka vola. Ankoatr'izay, ny zava-misy fa ao anaty 3D izy ireo dia tsy midika hoe tsy afaka hisaka izy ireo, satria ny halaliny dia homena amin'ny taratasy, mamorona ny fahatsapana fa manana sary misy ny sary, izay azonao atao ny miditra ao amin'io tsoratadidy io.
Tsoratadidy voalohany: saribakoly vita amin'ny taratasy
Safidy iray hafa amin'ireo tsoratadidy tany am-boalohany izay arosonay dia ny mamorona tsoratadidy amin'ny tananao. Mba hanaovana izany, ianao ihany no mila manana rectangles ny aizim-taratasy na baoritra, teo aloha Hetezo, ka handravaka azy amin'ny saribakoly izay azo natao tamin'ny origami. Mety amin'ny boky misy lohahevitra atsinanana izay hanampy ny mpamaky hifandray amin'ny alàlan'ny teboka boky.
Maro ny Olona Tsy Mahay mahita ny maripejy rehefa te-hamaky indray, matetika satria manify, ary tsy ho hita ao amin'ny boky (matetika ity mitranga rehefa maro boky pejy).
Noho izany, safidy iray hafa, izay tena tany am-boalohany koa dia ny zorony bookmarks, izay apetraka eo an-jorony ny pejy fa vakina ary amin'izany, avy any ivelany, fantatrao izay alehanao.
Fironana izy ireo izao, ary maro no manomboka mampiasa azy ireo. Ireo dia tsoratadidy izay mety ho silhouette ary, rehefa apetraka, dia raikitra miaraka amin'ireo pejy aorian'ny na alohan'ny hamakiana azy.
Miavaka amin'ny boky izy ireo saingy endrika mahafinaritra tokoa. Ny hany mahatsara azy dia ny mitandrina mba tsy hiondrika na vaky, zavatra mahazatra kokoa amin'ireto raha oharina amin'ireo teboka hafa ao amin'ilay boky.
Araka ny fantatrao, rehefa maka teboka famakiana ianao dia matetika no voaravaka amin'ny lafiny iray ihany; ny hafa dia matetika banga na ny base loko izay izy no atao pirinty. Fa amin'ity indray mitoraka ity ny hevitra arosontsika dia ny pirinty eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, Izany hoe mba tsy mampaninona hampiasa azy ireo amin'ny lafiny iray na ny hafa.
Ny fiovana iray hafa azonao atao dia ny tsoratadidy roa sosona, izany hoe, ny roa nanatevin-daharana ka rehefa tsy mitsahatra mamaky ianao, ny ataonao dia manamboatra ny tsoratadidy eo anelanelan'ny pejy, toy ny misambotra ilay pejy ianao. Araka izany, ny marika dia ho hita eo aloha sy any aoriana voaravaka.
Iray amin'ireo tsoratadidy tany am-boalohany hodinihina koa ity iray ity. Izy io dia fototra tsotra nefa, eo amboniny, dia hisy ny amboradara, mazàna atao amin'ny tanana, ny solontenan'ny singa sasany amin'ny tantara na boky izay fananany (raha misy) na zavatra mahazatra ary mety ho liana amin'ny mpamaky.
Misy fomba maro mba hahatonga azy ireo, mihoatra tsipiriany na latsaka, kanefa ny rehetra dia azy ireo amin'ny tena toy izany koa ny tsirairay satria ny tanjona dia ny hanome azy ireo ny sasany boky ary na dia mihasimba, satria mazàna no manana ny marika eo amin'ny tanana rehefa mamaky isika ary afaka hanompo anay miala voly.
Izy ireo dia fomba iray mamorona fanoharana izay ny marika mihitsy no lasa anjara fototra. Ohatra, sary an-tsaina ny mahitsi- mainty. Ao tenany tsy toa toy ny tena olana. Fa raha maty, famoronana silhouettes, fotsy sehatra, sns ary apetrakao amin'ny pejy iray dia miova ny zavatra satria manome azy ny halaliny.
Izany no arosonay, ny hamoronanao endrika izay tsy feno ny tsoratadidy fa hokapaina, na ho faty, amin'ny fomba mamorona sary mifanohitra amin'ny taratasy avy eo.
Hevitra famakiana voalohany: sehatra amin'ny literatiora
Ary farany, afaka misafidy ny hamerina amin'ny endrika hafa ianao, ny sehatra literatiora isan-karazany. Ary io, matetika, ny sarin'ny mpamaky mamaky dia afaka manintona ny mpamaky ary miaraka amin'izay dia mahatonga azy hanohy hamaky bebe kokoa.
Io dia hahafahanao Alefaso ny fomba kalazanao mba hamoronana sarin'ny zavatra azonao amin'ny famakiana. Mety ho tany am-boalohany amin'ny heviny hoe ianao no mamorona azy ho an'io tetikasa io; fa koa satria afaka milalao amin'ny fomba samy hafa, sy ny fomba sary mandra-hahita ny marina iray.
Hevitra ho an'ny tany am-boalohany tsoratadidy misy maro. Mila misaina fotsiny ianao toy ny mpamaky iray ary hahafantatra izay tiany tazomina eny am-pelatanany rehefa mandany boky. Rehefa manana izany ao an-tsaina, dia tsy maintsy milalao miaraka amin'ny jiro, haja, mahasoa sy ny lafin-javatra izay hahatonga ny famolavolana fahafaham-po ny olon-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Tsoratadidy tany am-boalohany
Ahoana ny famolavolana ny fonony aloha sy aoriana amin'ny bokinao
Ahoana ny fomba fanaovana thumbnails ho an'ny YouTube any Canva